Social Media အတွက် Cover Image နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေသိထားသင့်လဲ? -
တခါတလေ Social Media ပေါ်မှာကိုယ့် သတိမထားမိတဲ့ အချက်လေးတွေက အရမ်းကို အရေးပါနေတတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ Business လုပ်ငန်းတွေကို Social Media နဲ့တွဲပြီးလုပ်ကိုင်ထားတယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့ Business အတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ Cover Image က ဘယ်လောက်အရေးပါဝင်သလဲ? Cover Image ကဘာတွေအကျိုးအမြတ်ရမှာ? ဒီ Cover Image တွေဟာ Business လုပ်ငန်း မဟုတ်ပဲ သာမန် User တွေမှာတောင် ဒီ Cover Image ကတော်တေ်ာ စကားပြောပါတယ်။ User တွေဟာ သင့်ရဲ့ Social Media Profile ကိုဝင်ကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးတွေမှာက Profile နဲ့ Cover Image ကိုတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Min Thuta/ Thursday October 31st, 2019/ Blog/0Comment